Inona no atao hoe valan-javaboary: toetra sy lanjany | Green Renewable
Portillo Alemanina | 21/04/2022 12:00 | Tontolo_iainana
Ny zavaboary dia mila fitondrana fiarovana voaaro amin'ny lalàna mba hiarovana ny zavamaniry sy ny biby. Misy toerana voajanahary arovana amin'izany. Amin'ity tranga ity, andeha hojerentsika inona ny valam-pirenena. Ity dia sokajy fiarovana avo lenta izay mametra ny asan'ny olombelona sasany amin'ny faritra manodidina.
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny atao hoe valan-javaboary, ny toetrany ary ny maha-zava-dehibe azy.
1 Inona no atao hoe valan-javaboary
2 Ny asan'ny valan-javaboary
3 Ny maha-zava-dehibe ny valan-javaboary
4 Toetran'ny valan-javaboary
5 Fepetra ho an'ny sokajy
6 tantaran'ny valan-javaboary
Raha ny marina dia faritra arovana izy ireo izay manana sata ara-dalàna sy ara-dalàna voafaritry ny lalànan’ny firenena misy azy. Ity toe-javatra ity mitaky fiarovana sy fitehirizana ny zavamananaina manankarena ao aminy ary ny sasany amin'ireo toetra mampiavaka azy, izay matetika toerana malalaka malalaka izay mametra ny fivezivezen'ny olona. Satria ny tanjona dia ny miaro, mitahiry ary misoroka ny faharatsian'ny tontolo iainana monina amin'ireo habaka ireo, ary ireo toetra mampiavaka azy ireo. Mba hahafahan'ny taranaka ho avy mankafy ireo habaka ireo.
Ny asan'ny valan-javaboary
Ireto teboka manaraka ireto dia mampiseho ny maha-zava-dehibe ny asan'ny valan-javaboary, ka izany no mahatonga ny governemanta nandray fanapahan-kevitra ara-dalàna hiarovana azy ireo.
Arovy ny zavamananaina sy ny tontolo iainana
Arovy ny toeram-ponenana atahorana ho lany tamingana
Miantoka ny fahasamihafan'ny kolontsaina
Arovy ny zavamaniry sy biby atahorana ho lany tamingana
Miaro tontolo voajanahary tsy manam-paharoa
Tehirizo ireo toe-javatra fikarohana tsara indrindra
Fiarovana sy fiarovana ny faritra paleontolojika
Fiarovana sy fikajiana ny tahiry lava-bato
Halaviro ny fanondranana biby an-tsokosoko tsy ara-dalàna
Halaviro ny fandrosoana tafahoatra
Ny maha-zava-dehibe ny valan-javaboary
Ny maha-zava-dehibe ny valan-javaboary dia mety miainga amin'ny fiarovana sy fitehirizana ny toeram-ponenany sy ny tontolo iainana na ny toetra manokana ananan'ny zavamaniry sy biby ao aminy. Mandray anjara lehibe amin'ny fifandanjana biolojika izy ireo, satria mikendry ny hiaro ireo karazana zavamaniry sy biby izay tena mahazatra na miavaka amin'ireo faritra ireo. Mbola misy laharam-pahamehana ara-toekarena hafa, eny fa na dia ny firenena aza, ho hitantsika tsy ho ela.
Famoronana fidiram-bola: Isan'andro dia mitondra vola be ho an'ny firenena izy ireo ho an'ny foto-kevitra toy ny ecotourism sy hetsika fitsangatsanganana, toerana fitobiana, fiakarana an-tendrombohitra sy ny maro hafa.
Mamokatra harena voajanahary azo havaozina: Maro amin'ireo valan-javaboary no manana fahafahana lehibe amin'ny loharano azo havaozina, anisan'izany ny famokarana rano sy hazo tsara, ary voafehy ny famokarana azy.
Fiarovana ny harena voajanahary: Ireo karazana faritra arovana ireo dia mazàna manome fitoniana ara-toetr'andro ho an'ny ampahany betsaka amin'ny mponina eran-tany, manampy amin'ny fitoniana ny toetrandro, ny tany ary ny sasany amin'ireo vokatry ny loza voajanahary mety hitranga.
Araka ny efa hitantsika, ny maha-zava-dehibe ny valan-javaboary arovana dia tena ilaina ary tena ilaina amin'ny fahaveloman'ny firenena sy izao tontolo izao, ary koa ny planetantsika.
Na dia nanao ezaka mafy aza ny fandaminana maneran-tany mba hiarovana ireo faritra voajanahary, dia miatrika fandrahonana goavana izy io. Be dia be ny bibidia ao amin'ny fanjakana mora tohina, ary tombanana fa 50 isan-jato no nanjavona tao anatin’ny 40 taona farany, noho ny fanondranana an-tsokosoko tsy ara-dalàna sy ny fitrandrahana tafahoatra.
Ny valan-javaboahary dia tsy maintsy misy toetra sasantsasany mba hoheverina ho valan-javaboary, tsy maintsy manana lanja voajanahary ambony, toetra manokana ary mampiavaka ny zavamaniry sy biby ao aminy. Tokony homena laharam-pahamehana sy fikarakarana manokana avy amin’ny fitondram-panjakana izany.
Ambara ho valan-javaboary na vakoka nasionaly, dia tsy maintsy ahitana rafitra voajanahary solontena. Faritra midadasika mamela ny fivoarana voajanahary amin'ny fizotran'ny tontolo iainana sy ny fitsabahan'ny olombelona kely amin'ny lanjany voajanahary, noho izany dia zava-dehibe ny fahafantarana ny atao hoe valan-javaboary mba hanomezana azy ireo ny fifantohana mifanaraka amin'izany.
Imbetsaka izy ireo no fiarovana farany amin'ireo karazana atahorana ho lany tamingana. Manankarena zavamaniry sy biby izy ireo ary manana endrika ara-jeolojika miavaka. Tsy maintsy mamela ny fifandanjana ara-boajanahary eo amin’ny fiainana toy ny tany am-boalohany teto amin’ny planetantsika izy io. Ny tanjon'ny maro amin'ireo valan-javaboary ireo dia ny fiarovana ny bibidia sy ny famoronana toerana fizahan-tany, ary ny ecotourism dia teraka tamin'io foto-kevitra io.
Fepetra ho an'ny sokajy
Mba hijerena faritra na faritany iray ao anatin'ny valan-javaboary iray, dia tsy maintsy manana ireto toetra manaraka ireto izy, izay tokony hazavaina satria mety hiovaova araka ny lalàna na didin'ny firenena sasany:
Solontena: Izy io dia maneho ny rafitra voajanahary misy azy.
fanitarana: Manana velarana ampy ahafahany mivoatra voajanahary, mitazona ny toetrany ary miantoka ny fampandehanana ny fizotran'ny tontolo iainana ankehitriny.
Toeram-piarovana: Ny toe-javatra voajanahary sy ny fiasan'ny tontolo iainana no tena mibahan-toerana. Tsy maintsy zara raha misy ny fitsabahan'ny olombelona amin'ny soatoaviny.
Fitohizan'ny faritany: Afa-tsy ny maningana ara-drariny, ny faritany dia tsy maintsy mifanipaka, tsy misy velarana ary tsy misy fizarazarana izay manelingelina ny firindran'ny tontolo iainana.
fonenan'ny olombelona: Tsy tafiditra ao anatin'izany ny foibe an-tanàn-dehibe misy mponina, miaraka amin'ny maningana.
Fiarovana ara-dalàna: dia tsy maintsy arovan'ny lalàna sy ny rafitra ara-dalàna ao amin'ny firenenao
Fahaizana ara-teknika: Asaivo mahafeno ny tanjona amin'ny fiarovana sy ny fiarovana ny mpiasa sy ny teti-bola, ary avelao ihany ny asa fikarohana, fanabeazana na fankasitrahana ny hatsaran-tarehy.
Fiarovana ivelany: Voahodidin'ny faritany izay azo ambara ho tahiry vahiny.
Ny valan-javaboary dia matetika ambenan'ny mpiambina ny valan-javaboary mba hisorohana ny hetsika tsy ara-dalàna toy ny fitrandrahana biby na fanondranana an-tsokosoko tsy ara-dalàna. Mety ho velaran-tany midadasika ny valan-javaboarim-pirenena sasany, saingy misy ihany koa ny faritra misy rano midadasika, na an-dranomasina na an-tanety izay tafiditra ao anatin’ireo valan-javaboary ireo. Misy ohatra maro toy izany eto amin'izao tontolo izao.
Na dia tsy foto-kevitra araka ny fantatsika ankehitriny aza, dia misy firaketana momba ny tahirim-boahary tranainy kokoa any Azia, asehon'ny ala Sinharaja any Sri Lanka, izay nambara tamin'ny fomba ofisialy ho Lova Iraisam-pirenena UNESCO talohan'ny taona 1988.
Tamin'ny 1871, tamin'ny fananganana ny valan-javaboary Yellowstone any Wyoming, no teraka tamin'ny fomba ofisialy ny valan-javaboary voalohany. Ohatra, ny Yosemite Park dia noforonina tamin'ny 1890, tany amin'ny firenena mitovy amin'i Etazonia.
Tany Eoropa, ny foto-kevitry ny valan-javaboary dia tsy nanomboka nampiharina raha tsy tamin'ny 1909, rehefa nandany lalàna iray i Soeda, izay mamela ny fiarovana ny faritra voajanahary sivy lehibe. Espaina dia hanohana ny fananganana valan-javaboary ary tamin'ny 1918 namorona ny valam-pirenena voalohany, ny Vondrom-pirenena Eoropeanina.
Amin'izao fotoana izao dia mazava tsara ny momba ny valan-javaboary nasionaly sy ny asany, misy ny valan-javaboary, izay any Amerika Latina dia mibodo ny ampahefatry ny faritany, toy ny Maya Biosphere Reserve any Guatemala, na ny Pegaso any Arzantina Rito Moreno Glacier National. Park.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny atao hoe valan-javaboary, ny toetrany ary ny maha-zava-dehibe azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Tontolo_iainana » Inona no atao hoe valan-javaboary
Faharetana: vokatra mitsitsy angovo, rano ary akora